Inqubomgomo Yobumfihlo ye-TheneneSpy - Ukuvikeleka Kwemininingwane Nemithetho Yokusetshenziswa Kwezomthetho
Ngokusho komthetho we-GDPR waseYurophu Sigcina kuphela idatha yabasebenzisi kuze kufike izinsuku 45 kuphela lokho kuzosuswa ngokuzenzakalelayo. Kodwa-ke, umsebenzisi unomkhuhlane wokususa idatha yakhe yangasese noma kunini uma befuna kungakapheli isikhathi ngenxa yezizathu ezithile ezingavamile.
UMLANDO: Le Nqubomgomo isebenza phakathi kwakho, Umsebenzisi walesi Sayithi seWebhu kanye neTheOneSpy umnikazi kanye nomhlinzeki wale Webhusayithi. Le Nqubomgomo isebenza ekusebenziseni kwethu nanoma yikuphi idatha eqoqwe ngathi ngokuphathelene nokusetshenziswa kweWebhusayithi Yakho kanye nanoma yikuphi amasevisi noma izinhlelo ezikulo.
Kule Nqubomgomo imigomo elandelayo izoba nezincazelo ezilandelayo:
"I-Akhawunti" kuchaza ndawonye ulwazi lomuntu siqu, Ulwazi lokukhokha, kanye neziqinisekiso ezisetshenziswe ngabasebenzisi ukuthola ulwazi kanye / noma noma yiluphi uhlelo lokuxhumana kwiWebhusayithi;
"Okuqukethwe" kusho noma yikuphi umbhalo, ihluzo, izithombe, umsindo, ividiyo, isofthiwe, ukuqoqwa kwedatha nanoma yiluphi uhlobo lwolwazi olukwazi ukugcinwa kwikhompyutha evelayo noma eyingxenye yale Nwebhusayithi;
"Ikhukhi" kusho ifayela elincane lombhalo elibekwe kwikhompyutha yakho yiTheOneSpy uma uvakashela izingxenye ezithile zaleWebhu. Lokhu kusivumela ukuthi sibone izivakashi eziphindaphindiwe futhi sihlaziye imikhuba yabo yokuphequlula ngaphakathi kweWebhu Site. Lapho izindawo ze-e-commerce zinikezwa khona, Amakhukhi angasetshenziswa ukugcina i- "Shopping Basket, Cart" yakho njll.
"Idatha" kusho ngokubambisana lonke ulwazi oluthumela kwiWebhusayithi. Lokhu kuhlanganisa, kodwa kungagciniwe, imininingwane ye-Akhawunti nolwazi oluhanjiswe ngokusebenzisa noma yiyiphi yeNkonzo noma izinhlelo zethu;
"TOS" izindlela TheOneSpy
"Izikhungo" kusho ngokubambisana noma yiziphi izinsiza ku-intanethi, amathuluzi, izinsizakalo noma ulwazi oluthi iTheOneSpy lwenza litholakale ngeWebhu Site njengamanje noma esikhathini esizayo;
"System" kusho noma iyiphi ingqalasizinda yezokuxhumana e-InOneSpy eyenza ukuthi itholakale ngeWebhu Site njengamanje noma esikhathini esizayo. Lokhu kuhlanganisa, kodwa kungagciniwe, i-imeyili esekelwe kuwebhu, amabhodi womyalezo, izikhungo zengxoxo bukhoma kanye nezixhumanisi ze-imeyili;
"Umsebenzisi" / "Abasebenzisi" kusho noma yiliphi iqembu lesithathu elifinyelela kwi-Web Site futhi alisebenzisiwe yiTheOneSpy futhi lisebenza ngesikhathi sokusebenza kwabo; futhi
"Web Site" kusho iwebhusayithi oyisebenzisayo okwamanje (https://www.theonespy.com/) nanoma yiziphi ezinye izizinda zalesayithi: http://www.theonespy.com/fr/ http://www.theonespy.com / ar / http://www.theonespy.com/zh_cn/ http://www.theonespy.com/it/ http://www.theonespy.com/es/ http://www.theonespy.com/ru / http://www.theonespy.com/de/
Ngaphandle kokunciphisa, noma iyiphi yale Data elandelayo ingase iqoqwe:
imininingwane yokuxhumana njengamakheli e-imeyili nezinombolo zocingo;
ulwazi lomuntu njengeposi, izintandokazi, nezithakazelo;
ulwazi lwezezimali ezifana nezinombolo zekhadi lesikweletu / debit;
Ikheli le-IP (liqoqwe ngokuzenzakalelayo);
uhlobo lwesiphequluli sewebhu kanye nesimo (ukuqoqwa ngokuzenzakalelayo);
uhlelo lokusebenza (luqoqwe ngokuzenzakalelayo);
uhlu lwama-URLS okuqala ngesayithi lokudlulisela, umsebenzi wakho kule Nwebhusayithi Yesayithi, kanye nesayithi ophuma kulo (ukuqoqa ngokuzenzakalelayo); futhi
Imininingwane yekhukhi (bheka Isigaba 10 ngezansi).
Ukusebenzisa kwethu idatha
Noma iyiphi Idatha yomuntu oyithumele izogcinwa yi-TheOneSpy uma nje usebenzisa amasevisi nezinhlelo ezihlinzekwe kwiWebhusayithi. Idatha ongayithumela ngayo nganoma yiluphi uhlelo lokuxhumana esingalunikeza lungagcinwa isikhathi eside kuze kube izinyanga ezimbili.
Ngaphandle kokuba sibophezelekile noma sivunyelwe ngumthetho ukwenza kanjalo, futhi ngokuya kwesigatshana 4, idatha yakho ngeke idalulwe kwabanye.
Yonke Idatha yomuntu siqu igcinwa ngokuphepha ngokuhambisana nemigomo yoMthetho Wokuvikelwa Kwemininingwane 1998
Noma yikuphi noma yonke imininingwane engenhla ingadingeka ngathi ngezikhathi ezithile ukuze sikunikeze isevisi engcono kakhulu nesipiliyoni uma usebenzisa i-Web Site yethu. Ngokuqondile, Idatha ingasetshenziswa yizizathu ezilandelayo:
ukugcinwa kwerekhodi langaphakathi;
ukuthuthukiswa kwemikhiqizo / amasevisi ethu;
ukudluliselwa nge-imeyili yezinto zokuphromotha ezingase zibe nesithakazelo kuwe;
uxhumano lwezinhloso zokucwaninga emakethe okungenziwa ngokusebenzisa i-imeyili, ucingo, ifeksi noma i-imeyili. Ulwazi olunjalo lungasetshenziswa ukwenza ngokwezifiso noma ukuvuselela iwebhusayithi.
Amasayithi eWesithathu weWebhu namasevisi
I-TheOneSpy, ngezikhathi ezithile, ingasebenzisa izinsizakalo zabanye amaqembu ekubhekaneni nezindaba ezingabandakanya, kodwa azikhawulelwanga, ukuphathwa kokukhokha, ukulethwa kwezinto ezithengiwe, izikhungo ze-search engine, ukukhangisa nokukhangisa. Abahlinzeki balezi zinsizakalo abanakho ukufinyelela kwemininingwane ethile yomuntu eyanikezwa ngabasebenzisi Balo Webhusayithi. Noma iyiphi Idatha esetshenziswe yizinhlangano ezinjalo isetshenziselwa kuphela izinga elidingekayo ngabo ukwenza izinsizakalo ezithandwa nguTheOneSpy. Noma yikuphi ukusetshenziswa kwezinye izinjongo kuvinjelwe ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, noma iyiphi Idatha eqhutshwa ngabangaphandle kumele ilandelwe ngokwemigomo yalolu Pholisi futhi ngokuhambisana noMthetho Wokuvikelwa Kwemininingwane 1998.
Izinguquko zobunikazi beBhizinisi nokuLawula
I-TheOneSpy, ngezikhathi ezithile, ingandisa noma iyanciphise ibhizinisi layo futhi lokhu kungafaka ukudayiswa kwezigaba ezithile noma ukudluliselwa kokulawulwa kwezigaba ezithile kwamanye amaqembu. Idatha ehlinzekwa ngabasebenzisi, lapho kufanelekile kunoma yikuphi ukuhlukaniswa okudlulisiwe, idluliselwe kanye nalolo hlu kanye nomnikazi omusha noma iqembu elisha elisha, ngaphansi kwemigomo yalo Mthetho, kuzokuvunyelwa ukusebenzisa iDatha ngezinhloso wanikezwa nguwe.
Uma kwenzeka ukuthi noma yikuphi ukwaziswa okuthunyelwe ngabasebenzisi kuzodluliselwa ngaleyo ndlela, uzoxhumana nabo kusengaphambili futhi unolwazi mayelana noshintsho. Uma uxhunyanisiwe uzonikezwa ukukhetha ukuthi idatha yakho isuswe noma ivinjelwe kumnikazi noma umlawuli omusha.
Ukulawula Ukufinyelela kuDatha yakho
Nomaphi lapho kudingeka khona ukuthumela idatha, uzonikezwa izinketho zokuvimbela ukusetshenziswa kwethu kwale Datha. Lokhu kungafaka okulandelayo:
ukusetshenziswa kweDatha yezinjongo zokuthengisa ngqo; futhi
ukwabelana ngeDatha nabangaphandle.
Ilungelo Lakho Lokungavumi Ulwazi
Ungangena ezindaweni ezithile zeWebhusayithi ngaphandle kokunikeza noma iyiphi idatha. Noma kunjalo, ukusebenzisa zonke izinsizakalo nezinhlelo ezitholakalayo kwiWebhusayithi kungadingeka ukuthi uthumele ulwazi lwe-Akhawunti noma olunye ulwazi.
Ungavimbela ukusetshenziswa kwesiphequluli sakho se-intanethi yamaKhukhi.
Ukufinyelela idatha yakho siqu
Ungafinyelela i-Akhawunti yakho nganoma isiphi isikhathi ukubuka noma ukuchibiyela Idatha. Kungadingeka ukuthi uguqule noma ubuyekeze idatha yakho uma izimo zakho zishintsha. Imininingwane eyengeziwe mayelana nezintandokazi zakho zokuthengisa ingagcinwa futhi ungashintsha lokhu ngasiphi isikhathi.
Unelungelo lokucela ikhophi yedatha yakho yomuntu ngokukhokha imali encane.
Ukuvikeleka kwedatha kubaluleke kakhulu kuTheOneSpy futhi ukuvikela idatha yakho esiyibeke endaweni efanelekayo yokusebenza ngokomzimba, yezobuchwepheshe nokuphatha ukuvikela nokugcina idatha eqoqwe ku-intanethi.
I-TheneneSpy ingasetha futhi ifinyelele ama-Cookies kukhompyutha yakho. Wonke amakhukhi asetshenziswa yiWebhusayithi asetshenziselwa ngokuhambisana nezinhlinzeko zoMfihlo kanye nokuThintana kwe-elekthronikhi (i-EC Directive) Imithetho 2003 njengoba ichitshiyelwe yi-Private and Electronic Communications (EC Directive) (Ukuchitshiyelwa) Imithethonqubo ye-2011. I-TheOneSpy ikhethile ngokucophelela lawa maKhukhi futhi uwasebenzisa ukwenza lula imisebenzi ethile kanye nezici zeWebhusayithi. Sisebenzisa amakhukhi ngezinjongo zokuhlaziya. Lezi Cookies zilandelela ukunyakaza kwakho nemisebenzi kwiWebhusayithi Yethu futhi zenzelwe ukusinika ukuqonda kangcono kubasebenzisi bethu, ngaleyo ndlela kusivumela ukuba sithuthukise iSayithi leWebhu kanye nezinsizakalo zethu.
Ngaphambi kokuba iWebhu YaseKhaya ibeke amakhukhi kwikhompyutha yakho, uzokwethula nge-BAR MESSAGE ecela imvume yakho ukusetha lawo maKhukhi. Akukho namakhukhi asethwe yiWebhusayithi ayingozi engozini yakho nganoma iyiphi indlela futhi akukho idatha yomuntu siqu eqoqwe. Ngokunikeza imvume yakho ekulungiseleleni amakhukhi ethu usenza sikwazi ukunikeza ulwazi oluhle kakhulu kanye nensizakalo kuwe ngeWebhusayithi Yethu. Uma ufisa ukuphika imvume yakho ekubekeni kwamaKhukhi, izici ezithile zeWebhusayithi YeWebhu kungenzeka zingasebenzi ngokugcwele noma njengokuhlosiwe.
Ezinye izici ze-Web Site zixhomeke kuma-Cookies ukuze zisebenze futhi zithathwa, ngaphakathi komthetho, ukuba zidingeke ngokuqinile. Ngeke ubuzwe imvume yakho yokubeka lawa maKhukhi kodwa ungase ukhubaze amakhukhi ngezilungiselelo zakho zesiphequluli sewebhu.
Ungakhetha ukunika amandla noma ukukhubaza amakhukhi kusiphequluli sakho sewebhu. Ngokuzenzakalelayo, isiphequluli sakho sizokwamukela amakhukhi, noma kunjalo, lokhu kungashintshwa. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe sicela uthintane nemenyu yokusiza kusiphequluli sakho. Ukukhubaza amakhukhi kungakuvimbela ekusebenziseni uhla olugcwele lwezinsizakalo ezitholakalayo kwiWebhusayithi.
Ungase ususe ama-Cookies nganoma yisiphi isikhathi kodwa ungase ulahlekelwe yiluphi ulwazi olwenza ukwazi ukufinyelela ngokushesha kuwebhusayithi.
I-Web Site isebenzisa amakhukhi wesithathu. Lawa makhukhi awahlanganisi nezinsizakalo ezinikezwa yiwebhusayithi kuwe futhi angavinjelwa ekukhetheni kwakho ngezilungiselelo zobumfihlo zakho ze-intanethi.
Kunconywa ukuthi uqinisekise ukuthi isiphequluli sakho se-intanethi sisesikhathini futhi uxhumane nosizo nesiqondiso esinikezwe unjiniyela wesiphequluli sakho uma ungaqiniseki ukuthi ungalungisa kanjani izilungiselelo zakho zobumfihlo.
Izinguquko le Nqubomgomo
I-TheneneSpy inelungelo lokushintsha le Nqubomgomo Yobumfihlo njengoba singase sibone kunesidingo ngezikhathi ezithile noma kungadingeka ngomthetho. Noma yikuphi ukuguqulwa kuzothunyelwa ngokushesha kwi-Web Site futhi kubonakala sengathi wamukele imigomo yeNqubomgomo ekusebenziseni kwakho kokuqala kweWebhusayithi emva kokuguqulwa.
12. I-Convention Version yenqubomgomo yobumfihlo ye-TheOneSpy
Le nqubomgomo iveza imikhuba yobumfihlo eyathathwa iTheOneSpy (ebizwa ngokuthi 'iwebhusayithi' ngenhloso yalolu dokhumenti) mayelana nokuthola nokusebenzisa ulwazi lomuntu siqu olunikezwe kuwebhusayithi yethu. Ngaphezu kwalokho, le nqubomgomo yobumfihlo iphinde ichaze izinketho ezikhona kuwe eziphathelene nokuthi singasebenzisa kanjani ulwazi lwakho lomuntu siqu, nendlela ongayifinyelela ngayo futhi ubuyekeze lolo lwazi.
Asivumeli muntu ukuba amqaphe ngaphandle kwemvume yakhe ebhaliwe. Uma kwenzeka sazi ukuthi umuntu usebenzisa ukuqapha umuntu ngaphandle kwemvume yakhe ebhaliwe, sisula ngokushesha ilayisense yomsebenzisi, ngaphandle kokukhokha noma yikuphi imali njengembuyiselo.
Ukuqoqwa kolwazi nokusetshenziswa:
Ku-TheOneSpy, siqoqa izinhlobo ezimbili zolwazi kuwe:
Ulwazi lomuntu siqu olunikezela ngokuzithandela uma ubhalisa imikhiqizo noma amasevisi ethu.
Ulwazi lokulandelela kanye nokusetshenziswa kwesayithi oluqoqwa ngokuzenzakalelayo njengoba uvakashela iwebhusayithi yethu.
Uma kwenzeka unikeza noma yiluphi ulwazi olukhulunywe ngenhla kithi, luzobhekwa njengesivumelwano senqubomgomo yethu yobumfihlo. Kuyinqubomgomo yethu ukusebenzisa ulwazi lomuntu siqu olunikezwe nguwe ukuze sikunikeze imikhiqizo namasevisi osicelayo ukuba sihlinzeke. Asivumeli noma yiliphi umuntu wesithathu ukusebenzisa ulwazi lomuntu siqu olunikezwa nguwe (ngaphandle kwezimo ezihlukile ezishiwo 'Kwezomthetho Okuqukethwe' ngezansi). Ukuze uvikele ulwazi lwakho lomuntu siqu, sisebenzisa izindlela ezihlukahlukene zokuphepha kwe-intanethi. Noma ubani angakwazi ukufinyelela iwebhusayithi yethu, kodwa uma udinga ukwenza ukuthengwa kwe-intanethi noma ubhalisele iphephandaba lethu, udinga ukusinikeza ngolwazi lwakho lomuntu siqu, olungabandakanya igama lakho, ikheli le-imeyli, ikheli leposi, nezinye izinto ezifana ulwazi.Usekelwe kolwazi lomuntu siqu oluhlinzekwe nguwe, singakuthumela i-imeyili eyamukelekile, ukuze uqinisekise igama lomsebenzisi nephasiwedi yakho. Singase futhi sikhulume nawe uma uhambisa noma yimiphi imibuzo nathi, mayelana nanoma yiluphi ulwazi noma isevisi ongayicela noma ukwenza noma yiziphi izinguquko ku-'khawunti yakho 'kuwebhusayithi yethu.Uma ungasinikezi ngolwazi esikucelayo thina ukuhlinzeka, ngeke ukwazi ukusebenzisa ezinye noma zonke imikhiqizo namasevisi anikezwa yiwebhusayithi. Senza konke okusemandleni ukugcina imfihlo yonke imininingwane yomuntu eyanikezwa nguwe. Asivumeli noma yimuphi umuntu wesithathu ukusebenzisa ulwazi lomuntu siqu olunikezwe nguwe ngaphandle kwemvume yakho ebhaliwe. Ulwazi oluningi olunikezwa nguwe lungaba 'iphasiwedi evikelwe,' ngakho udinga ukuthatha izinyathelo ezikhethekile ukuqinisekisa ukuthi iphasiwedi ihlala ivikelekile. Uma kwenzeka usebenzisa ikhompyutha yomphakathi noma wabelane ngegajethi nabanye, qiniseka ukuthi uphume ngemvume ku-akhawunti yakho futhi uvale isiphequluli ngemuva kokufinyelela iwebhusayithi yethu ukuze kungabikho muntu othola ulwazi lwakho lomuntu siqu. Unomthwalo wemfanelo yokusetshenziswa kwamaphasiwedi owakhayo ukuze ufinyelele i-akhawunti yakho kuwebhusayithi yethu.
I-12.1. Ukwaziswa kokulandelela kanye neSayithi okuqoqwe ngokuzenzakalelayo:
Siphinde siqoqe futhi sigcine ulwazi olwenziwe ngokuzenzakalelayo njengoba uhamba ngamakhasi ewebhu kuwebhusayithi yethu. Isibonelo salolu lwazi lungaba 'ukungena amafayela' mayelana nokuxhumeka kwe-intanethi yekhompuyutha yakho, njengekheli le-IP, ubude besikhathi esichithwa kuwebhusayithi, namakhasi afinyelelwe ngesikhathi sokuvakasha ngasinye. Singasebenzisa ulwazi olunjalo ukuqondisa isayithi, ukuqoqa ulwazi olubanzi lwabantu, bahlaziya imikhuba, noma balandele ukuhamba komsebenzisi ngokusebenzisa iwebhusayithi. Ikheli le-IP alithathwa njengolwazi oluqondene nomuntu ngaphandle kwecala uma ucela noma iyiphi insizakalo ye-premium njenge-e-mail yezindaba. Ngokuvamile, ulwazi oluhlangene lusivumela ukuba sihlole ithrafikhi kuwebhusayithi futhi sithuthukise ukulethwa kwamakhasi ethu wewebhu kumsebenzisi wokugcina. Uma ngabe siqoqa ulwazi lomphakathi kusuka kuwe, njenge-age yakho noma imfundo, ngeke sivumele noma yikuphi omunye umuntu wesithathu ukuthi afinyelele lolo lwazi ngendlela oyihlonipha ngayo. Kodwa-ke, noma yiluphi ulwazi olungabelwa ngalo luyoba uhlobo oluhlangene, kuze kube yilapho sifuna ukwabelana ngolwazi nanoma yimuphi umuntu wesithathu, ngaphansi kwezimo ezibalulwe esigabeni esilandelayo 'Izindaba Zezomthetho.' ('Ukwahlukanisa' kusho noma yiluphi ulwazi lomuntu oluphathelene nezici zeqembu.)
I-12.2. Izindaba Zezomthetho:
I-TheneneSpy ithatha izinsizakalo zakho zibe yize zangasese. Uma kwenzeka kukhona ushintsho ekulawuleni i-TheOneSpy (njengendlela yokuthengisa noma ukuhlanganiswa) noma, ulwazi lomuntu siqu lwabasebenzisi luzodluliselwa kumnikazi omusha wewebhusayithi. Asibophezele ngokomthetho ukwazisa abasebenzisi bethu noma yikuphi ukuthengiselana okunjalo. Ungaguqula njalo noma ususe ulwazi olunikezwa nguwe ngokuthi uxhumane nathi njengoba kushiwo ngezansi. Uma ngabe umnikazi omusha ethumela Inqubomgomo Yobumfihlo entsha ngolwazi olusha lokuxhumana, ungashintsha ulwazi olunikezwe wena noma ulandele imiyalo emisha ethunyelwe umnikazi omusha.
I-12.3. Ukwaziswa kwangasese kwezingane:
Lewebhusayithi ayihloselwe ukusetshenziswa izingane ezingaphansi kwe-18. Asiqoqa ulwazi kusuka kubantwana noma kwabancane, ngokuziwayo. Siyacela abazali nabagcini bomthetho ukuba babheke ukusetshenziswa kwe-intanethi yezingane zabo futhi bafundise izingane zabo, ukuba bangahlinzeki ngolwazi kuwebhusayithi yethu ngaphandle kwemvume yabo, ukuze basize ukuphoqelela inqubomgomo yethu yobumfihlo.
I-12.3a. Inqubo Yokuqinisekisa Yomnikazi Wemikhumbi Nomthengi:
I-TheneneSpy ingenza inqubo yokuqinisekisa yamarekhodi ethu kuphela, ukuqinisekisa ukuthi uhlelo lwethu lokusebenza alubandakanyi ukubhekwa okungahambi kahle futhi okungalungile nganoma yimuphi umsebenzisi wethu. Ngakho-ke, singaqinisekisa umthengi kanye nomgomo womsebenzisi, ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa uhlelo lwethu lokusebenza ngezinjongo zomthetho.
Uma singatholi ukuqinisekiswa yizinsuku ze-5 zesicelo, khona-ke sizomisa ilayisense futhi sixhumane nomsebenzisi we-Target ukuphenya ngokuqhubekayo.
Uma-ke uma amadivaysi womsebenzisi wezinhloso eziqashwe ngumuntu osebenzisa isofthiwe yeTheOneSpy ngaphandle kokuthatha imvume yakhe, bangabika ukuhlukumeza / ukuhlukunyezwa ngezansi kwesixhumanisi futhi kudingeka nje banikeze ulwazi olubalulekile. Umbiko Ukuhlukunyezwa nokuhlukunyezwa.
I-12.4. Ukuzibophezela kwethu ekuvikelekeni kwedatha:
Sisebenzisa isofthiwe yokuphepha, i-hardware yokuphepha, nokubuyekezwa kwesofthiwe kanye nezinqubo zokuskena kwenethiwekhi, ukuze sivikele futhi sivikele ulwazi ngaphansi kokulawula kwethu futhi silandele izindinganiso zemiboni evunyelwe ngokuvamile. Sisebenzisana nabanikezeli bezinsizakalo zenkampani yesithathu abasebenzisa ukubethela nokuqinisekiswa ukulondoloza ubumfihlo bemininingwane yakho yomuntu siqu. Uma igcinwe, sigcina ulwazi lomuntu siqu kumasistimu ngemuva kwamaprofolo, lapho abasebenzi abalinganiselwe kuphela abangafinyelela khona. Noma yiyiphi yabasebenzi bethu abanolwazi lokuthola ulwazi oluyimfihlo lubophezelekile ukuvikela ulwazi ngendlela ehambisana nale Nqubomgomo Yobumfihlo, futhi ungasebenzisi ulwazi nganoma iyiphi injongo, ngaphandle kwaleyo ephathelene nezinsizakalo abadingayo ukuze benze iTheOneSpy. Uma ngabe abasebenzi abanjalo behluleka ukuhlangabezana nemithwalo yabo yemfanelo, bangase banqanyulwe noma isenzo somthetho singaqhubeka nabo. Naphezu kokuthi sisebenzise amazinga ethuthukile wokuphepha ekulondolozeni ukuphepha kwedatha yakho, akukho ndlela yokugcinwa kwe-elekthronikhi noma ukudluliswa kwedatha phezu kwe-intanethi i-100% ephephile, ngakho asiqinisekisi ukuphepha kolwazi oluthunyelwe kithi phezu internet.
I-12.5. Izinguquko noma izibuyekezo zale Nqubomgomo Yobumfihlo:
Singenza izinguquko kule nqubomgomo nganoma isiphi isikhathi, ngakho-ke sicela ufunde le nqubomgomo njalo. Sizothumela izinguquko kuwebhusayithi yethu, kepha asidingeki ukuba sikutshele noma yikuphi ushintsho olunjalo. Noma yiluphi ushintsho luzophazamisa lonke ulwazi esikuqoqile kuwe ngaphambilini, kanye nolwazi olunikezwa wena ngemuva kwalolu shintsho, futhi lungabandakanya nokusetshenziswa okwengeziwe noma ukudalulwa kolwazi. Uma ngabe yiziphi izinguquko ezenza ushintsho olubonakalayo mayelana nolwazi lwakho lomuntu siqu, izinguquko zizothunyelwa ngaphambi kokuba zenzeke ngempela. Singathumela isaziso ngokuphathelene nayo ekhasini eliyisiqalo lewebhu. Nokho, asiphoqelekile ukwenza kanjalo. Uma unesiphi isikhalo, usazise ukuze sikwazi ukususa ulwazi esikuqoqe ngaphambilini kuwe. Qaphela ukuthi ukuhlinzekwa kolwazi kubhekwa njengemvume yakho yokusebenzisa lolo lwazi ngokusho kwenqubomgomo yobumfihlo ekhona manje. Ukuze ushintshe ulwazi lomuntu siqu olunikezwe nguwe, sicela uxhumane nathi njengoba kufundiswe ekupheleni kwale Nqubomgomo Yobumfihlo.
Xhumana nathi: Uma ngabe unemibuzo ephathelene nale Nqubomgomo Yobumfihlo, noma uhlose ukwenza noma yiziphi izinguquko emininingwaneni yomuntu siqu esinikezwe yona, noma ususe idatha kusuka database yethu, usithumelele i-imeyli ku- support@theonespy.com. Faka amagama "Re: Inqubomgomo Yobumfihlo" njengendaba ye-imeyli oyithumela kithi.